'Garten', tolo-kevitra famoronana sy voninkazo an'ity mpanakanto antsoina hoe Louse | Famoronana an-tserasera
Omaly izahay dia teo aloha Tolo-kevitra ara-java-kanton'i Munro misy jiro 50.000 XNUMX de mitafy ny tany efitra any Aostralia hanovana azy ireo ho lasa hallucination tsy ampoizina toy ny nalaina avy amin'ny angano.
Io jiro be io no ahitantsika ny fitovian'ny asan'i Louse Law ny voninkazo 30.000 naato tamin'ny rivotra manao sary voninkazo mameno ilay efitrano hanomezana azy ny hanitra sy ny hatsarany rehetra. Tolo-kevitra ara-javakanto izay itarihan'ny volan'ny voninkazo marobe antsika miaina fahatsapana hafa.
Ny mpanakanto Rebecca Louse Law dia fantatra amin'ny fametrahana voninkazo izay nipoitra na aiza na aiza manomboka amin'ny Times Square any New York ka hatrany amin'ny Onassis Cultural Center any Athens. Tamin'ny taona 2014, nasehony tao amin'ny Museum Museum any London, izay nanomana voninkazo 4.600 XNUMX napetrany teo ambonin'ny tampon-trano amin'ny endrika fikarohana eo amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny flora sy ny lamaody. Ny famoronana farany dia manaraka an'io lalana io ihany any amin'ny foibe fiantsenana antsoina hoe Bikini Berlin.
Tao izy no namorona fametrahana voninkazo mihoatra ny 30.000 mihantona amin'ny valindrihana. Mitondra ny lohateny hoe Garten ary misy raozy isan-karazany amin'ny orkide sy karazana voninkazo hafa. Ny tsirairay amin'izy ireo dia hokapaina amin'ny tànana ary apetraka amin'ny tariby varahina mba hametrahana azy ireo avy amin'ny haavo samy hafa mba hamoronana vokatra ripple.
Ny fametrahana dia fiaraha-miasa amin'ny a fandraisana andraikitra antsoina hoe Toll dia blumen machen ary izay natao handrakofana ny hakantony sy ny fahasamihafana amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona. Manasa ny mpijery ihany koa i Garten mba handinika ny synergy misy eo amin'ny hatsarana voajanahary sy vitan'ny olombelona, ​​milaza fa ny mifameno no tokony haleha.
Raha te hanohy ianao ny asany sisa ianao dia manana ny facebook-nao. Mpanakanto voninkazo manana fametrahana famoronana goavana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Voninkazo 30.000 naato avy amin'ny valindrihana ho an'ity zaridaina manokana ity